ဤသည်မေးခွန်းကိုရိုးရှင်းသေးရှုပ်ထွေးဖို့အဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းခန့်ရှိပြီခဏတစ်ဘို့၊အခါကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှရှင်းပြမှကမ္ဘာအဘယ်ဂုဏ်အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်ဖြစ်ကြပြီးသင်သည်အဘယ်သို့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ အများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊အခါအင်တာနက်နီးပါးအတွက်၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၊အဆိုပါ"အကောင်းဆုံး"အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများခဲ့သည်ဘာမှမထက်ပိုရိုးရှင်းလှပတဲ့ဂိမ်းတွေ့အပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။, ကုန်တင်အဲဒီလိုအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများအမြဲတမ်းအယူအနည်းငယ်ထာခဲ့ရောက်စေဖို့အချိန်အများကြီးသောကြောင့်မနားလည်ရန်လွယ်ကူသောထိုအင်္ဂါနှင့်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများ။ ဒီနေ့အရာအားလုံးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်၊ကြောင့်အခုရှိနေတဲ့ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းအပေါ်အလေးပေးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း။ ယနေ့ရှိပါတယ်တကယ်အာက္အေးမြဂိမ်းများ။ ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်အတွက်လာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လူတိုင်း၌ရှိသောသူများအတွက်စိတ်ဓါတ်များကြောညမ်းဂိမ်းများလည်းအတွေ့အကောင်းဆုံး XXX။, ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအံဝင်ခွင်ကျနေကြတယ်။
အစအဦး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအမြဲသောငါတို့သည်ကစားအတွက်သင့်လျော်သောလိင်ဂိမ်း–သို့မဟုတ်ပင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ–တကယ်သေချာစွာ။ အဆိုပါကစားသမား၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအတိုင်းလိုက်နာတင်းကျပ်သောညွှန်ကြားချက်မရန်အလျင်ဘာမှမပေမယ့်ကြိုးစားဖို့အားလုံးရှုထောင့်အပြာ။ ဤသည်အလွန်အရေးပါကြောင့်သာလျှင်သင်အမှန်တကယ်ကြိုးစားနှင့်ပျော်မွေ့လိင်ဂိမ်းများချအသေးဆုံးအသေးစိတ်၊သင်သည်လည်းရေးဖို့သစ္စာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဤသို့အကြံပြုထောက်ခံလိင်ဂိမ်းများအတွက်ကောင်းတာဝန္သိစိတ္ပါေသာ။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအောက်ပါအတိုင်းစာရင်း၏အရေးအပါဆုံးအချက်များပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါအသီးအသီးညမ်းဂိမ်းနှင့်သာအခါအမှတ်တိုင်းဟာဒီစာရင်းကိုဖိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်သောသက်ဆိုင်ရာဂိမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားဂိမ်းစျေးကွက်အပေါ်။ သာအခါဤအမှုအလုံးစုံပြည့်စုံသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်ရေးအကြောင်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးဂိမ်းနှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရှိမရှိကယ့်ကိုအကောင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်း။ သာထိုနောက်မှအကဲဖြတ်၎င်း၏လမ်းကိုတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်!, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်၊ဒါကြောင့်မလွယ်ကူသောအနှုန်းသည်လိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်သည်သေချာစေရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကုန်အဖြစ်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်သင့်ရဲ့ညမ်းဂိမ်း။ ဤသည်ကိုလည်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်ကျွန်တော်မလုပ်ရအောင်ဆိုပင္ယူ။ လူတိုင်းသိတယ်ဤသည်အကောင်းဆုံးသောဝက်ဘ်ဆိုက်၊အင်တာနက်ပေါ်မှာအဘို့ရှာကြသည်လျှင်အပူဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်းသင့်ကြောင်းဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘဲရှိနေ!
နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်၊ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်အပေါ်အခမဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ၊အရာကိုလည်းပူဇော်ရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ပေးဆောင်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်များအတွက်ဥပမာသာသကြားလုံးနှိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းနှင်။ ဒါပေမယ့်လည်းအချို့အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ငါတို့သည်ပူဇော်အကောင်းတစ်ဦးရောနှောအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။ ဒါကြောင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့ဂိမ်းနှင့်ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း။ သင်အစဉ်အပေါ်ရေတွက်ငါတို့အကြံပြုချက်များအဖြစ်စုံလင်သော။, ဖြစ်စေချင်အခမဲ့ဂိမ်းသို့မဟုတ်ပေးဆောင်လိင်ဂိမ်းများ–သင်အမြဲအတွေ့အကြုံအဖြေအစည်းအဝေးများ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး။ တိုင်းဂိမ်းထဲမှာသင်အပြုံးပီ! သို့သော်၊ပါကကျေးဇူးပြုပြီးအများစုမှာဒီဂိမ်းသင်လိုအပ်၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်။ မဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်အဘို့အဆပ်ဖို့ဘာမှမ။ ဒါဟာမသာအများအတွက်အသုံးပြုလွာင္သိမ္းဆည္းနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များ။ သင်သည်လည်းသုံးနိုင်သည်အဒါခေါ်မပါအီးမေးလ်များအတွက်ဖွင့်သင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်ဖြစ်ပါသည်၊အရာသာများအတွက်ရည်ရွယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်။, ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါသောကြောင့်၊ကျနော်တို့အရှာဖွေအရာအားလုံးကိုအနှောက်ယှက်နှင့်မျှမပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူငါတို့အကြံပြုချက်များယနေ့တိုငျအောငျ။
ဒီအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာမူတည်သင့်စိတ်ကြိုက်! စက်မှုလုပ်ငန်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ၊သေချာပါသင်အခြေခံအားဖြင့်တွေ့မဆိုညစ်ညမ်းမျိုးဂိမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်း။ မည်သို့ပင်သင်ကဲ့သို့ခံစားရ၊အကယ်စင်စစ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားလိင်ဂိမ်းသင်ကြိုးစားချင်တယ်။ ရှိပါတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ဖြားယောင်းချိန်းတွေ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကစားသမားကိုယ်တော်တိုင်အတွက်လုံးဝအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဘို့အကြည့်အဖြစ်အပျက်။ သင်သည်ထိုအပြုအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်ရှာဖွေပြီးပြည့်စုံသောချစ်ရာ။, ငါတို့သည်လည်းသတိထားမိနိုင်မားတဲ့တိုးညစ်ညမ်းနှင့်အတူအဓိကအသင်ျ။ ဒီကစားသမားကိုခံစားနိုင်လိင်တူအပြန်အလှန်မိခင်၊အစ်မ၊မောင်နှမဝမ်းကွဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မမေ့မလြော့ရပါမည်တပြင်လုံးကိုအသစ်၏အုပ်စု RPGs ယူကြပြီမိမိတို့နေရာအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကအားကစားအတွက်ကောင်းစွာလူသိများစိတ်ကူးယဉ်လောက၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Skyrim။ ရော်ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းလူကြိုက်များ။ ဒီမှာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကြီးစွာသောရှိပါတယ် parodies အပေါ်စော်ကားမှု၊နှင့်ရိုက်သံ Overwatch။, သင်ကျိန်းသေထွက်စစ်ဆေးသင့်၏ကမ္ဘာ Whorecraft လျှင်သင်၏ပရိသတ်တစ် Blizzard ဂိမ်း။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အချို့သောယ့်ကိုပူပြင်းတဲ့ XXX အရေးယူ။
ဟုတ်ပါတယ်၊တယောက်ရှိရေတွင်းတစ်တွင်း-တည်ထောင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအွန်လိုင်းဂိမ်းဆောင်ခဲ့တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝေမျှစိုးရိမ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့်ကျွန်မတို့ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးအွန်လိုင်းဂိမ်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှင့်သေချာအောင်အရာအားလုံးကိုကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ကိုမဆံ့မပါဘူးမည်သည့်အန္တရာယ်စီအစဉ်များ၊ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် Malware။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့အလွန်ခက်ခဲပူဇော်သင်အကောင်းဆုံးဂိမ်း။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်အရာအားလုံးနှင့်အပြေးမျိုးစုံဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကင်နာဖို့သေချာအောင်ဘာမှမရရှိသွားတဲ့ကြောင်းမှတဆင့်အသကျကိုမရမနေသင့်။, သို့သော်၊သာအကွောငျး ၂၅%အဆိုပါအွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲအကြံပြုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့။ ကြွင်းသောအရာအတွက်ကစားနိုင်ပါတယ်အရာက္ဇာမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ဒီဂိမ်းများလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်နေဆဲတစ်ဦးသပ်သပ်ရပ်ရပ်အခြားရွေးချယ်စရာအသင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ဘာမှမသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်၊သင်အကယ်စင်စစ်ရှာဖွေဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်မသည်အလွန်ပျော်စရာများမှာအခါသင်အတင်းအဓမ္မကစားသမားအဖြစ်ကစားအွန်လိုင်းဂိမ်းမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်အပေါ်တစ်ဦးဂုဏ်နှင့်ပျြောအဆင့်။ ဒီဟာကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာ၊အထူးသဖြင့်အတူအခမဲ့ဂိမ်းများ။ ဒီနေရာမှာလည်း၊သင်ဘေးကင်းလုံခြုံဘက်မှာအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကြောင့်၊လူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကျနော်တို့ရီ၊သာ ၃၀%မှလုပ်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်သာရကိုကြည့်ဖို့ဂိမ်းအတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်း။, ဂိမ္းအတြက္-အရွယ်ရောက်ပြီးနိုင်ယေဘုယျအားဖြင့်လာနှင့်အတူကြီးဘတ်ဂျက်နှင့်လည်းအပြားအကောင်းအသင်းမှထုတ်လုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်များ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကမ္ဘာ၏အဂိမ်းများများအတွက်လူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့ကောင်း။ အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကြောအခုအချိန်မှာ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ဟုတ်လျှင်၊အမြီးသည်ခက်နှင့်အလိုဆန္ဒကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်၊ထို့နောက်အရည်အသွေးသေချာပေါက်ရေး။ အဘယ်သူမျှမ၊အသစ်အရေးကြီးပါသည်! အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဂရပ်ဖစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။, အဆိုပါဂိမ်းဖြစ်ရမည်မျက်စိကိုအဘို့ပွဲနှင့်ချက်ချင်းဆွဲဆောင်အားလုံးမျက်စိမှတဆင့်ရ။ တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းတကယ်ကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်လူတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိပါတယ်ဂရပ်ဖစ်။ ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုရေတွက်! ကြီးစွာသောအရာကညစ်ညမ်းဂိမ်းများသင်ကျေနပ်အောင်တော်တော်အများကြီးဆိုသောစိတ်ကူးယဉ်၏ဦးခေါင်းသို့ကြွလာ။ သင်သာဒီဇိုင္းအချိန်မှာအမျိုးသမီး၊ဒါပေမယ့်လည်းအပြီးပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘယ်အရာကိုအရေးပါပါတယ်။ ဒါကဘာကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလိင်မြင်ကွင်းအတွက်ဒီဂိမ်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှု။
ရာ VR ဂိမ္းတန်ဖိုးရှိ?
ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် VR ဂိမ္းနိုင်ခဲလှတက်စောင့်ရှောက်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ကံမကောင်းတာ၊သာအနည်းငယ်ဒီဂိမ်းအမှန်တကယ်ကောင်းသော။ သို့သော်၊သတင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသင်အမှန်တကယ်ရှာတွေ့မှသာအကောင်းဆုံး၏ဤ VR ဂိမ်းများ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်ဆေးမှသာအကောင်းဆုံး VR ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဒါကြောင့်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်ကောင်းတစ်ဦး VR ညမ်းဂိမ်း၊ထိုအခါသင်ဖို့အာမခံရှာတွေ့နှင့်အတူ!!!! ရိုးရှင်းစွာအအောက်ကိုဆင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းသည်အထိသင်ရှာဖွေစုဆောင်း VR။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုမဖြစ်စေခြင်းငှါကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်!, ကြောင်း၊သို့သော်မှတ်ချက်တိုင်း VR ဂိမ်းခဲ့သည်အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်အတူလူ VR။ ကြောင်း၊ဤလူမဟုတ္ပါဘူးကစားပံု ၃D ဗားရှင်း။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်သောသူကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်ဒီဂိမ်းအခါဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်ပေးသင်ပြောပြနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဘယ်လောက်ပျော်စရာခဲ့။ ဒါကြောင့်၊နောက်ထပ်တစ်ခါလျှင်၊သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်ကိုအကောင်းဆုံးအလိင်ဂိမ်းများ၊ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်ကူညီအာမခံ။
ပြီးအီးမေးလ်ဖော်ပြ၏။ ကျနော်တို့အမြဲရှာနေကြသူများအတွက်အသိအမှတ်မပြုကောင်းညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း။ ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ထားစုဆောင်းဖို့သာအကောင်းဆုံးလူအဘို့ဤအလုပ်။ ဒီတော့လျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးတော့၊သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရေးဖို့အတွက်ပြီးနောက်အချိန်အတွက်။ နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမှာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အချို့သောအချိန်ယူပြီးများအတွက်။ ထွက်ကြိုးစား၏အချို့အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အတွက်အကြံပြုပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း! ယခုအကောင်းဆုံးအချိန်ထွက်ကြိုးစားဖို့ဤဂိမ်း! သင်တို့သည်ယုံကြည်မည်မဟုတ်သင်၏မျက်စိ!